Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Vancouver dia mametraka kioska maharitra eropeana voalohany ho an'ny fifehezana ny fidirana sy ny fivoahana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Vancouver dia mametraka kioska maharitra eropeana voalohany ho an'ny fifehezana ny fidirana sy ny fivoahana
Androany, ny Vancouver International Airport (YVR) Innovative Travel Solutions (ITS) dia nanambara ny fametrahana kiosko 74 BORDERXPRESS. Nifandray tamin'i Edelman PR ny eTN hamela anay hanaisotra ny rindram-bola amin'ity famoahana gazety ity. Tsy mbola nisy valiny. Noho izany, ataonay ho an'ny mpamaky anay ity lahatsoratra vaovao ity ary manampy rindrambaiko iray izahay.
Androany, ny Vancouver International Airport (YVR) Innovative Travel Solutions (ITS) dia nanambara ny fametrahana kiosko 74 BORDERXPRESS ao amin'ny Pafos International Airport (Pafos) sy ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenen'i Larnaka (Larnaka) any Sipra. Ity dia mari-pamantarana lehibe ho an'ny indostria sy ny ITS, satria ny fanambarana anio dia ny fampiharana ny kioska maharitra ho an'ny fidirana amin'ny sisintany fidirana sy fivoahana any Eropa.
Hermesports Ltd, miasa ny seranam-piaramanidina Pafos sy Larnaka, dia mametraka ny kiosks hahafahan'ny mpandeha mamita tsy miankina ny fomba fifehezana ny pasipaoro eo ambany fanaraha-mason'ny mpiasan'ny Hermes ary miaraka amin'ny fankatoavan'ny polisy Sipra.
"Rehefa mitombo hatrany ny fangatahana dia an-dranomasina, ny seranam-piaramanidina eran'izao tontolo izao dia tsy maintsy mandray sy mampihatra teknolojia vaovao hamahana ireo fanamby fanodinana krizy be pitsiny," hoy i Craig Richmond, filoham-pirenena sy CEO, Vancouver Airport Authority. "Ny kiosk BORDERXPRESS dia hampitombo ny fahombiazany ary hanatsara ny traikefan'ny mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina Pafos sy Larnaka sady hanatsara ny fiarovana sy ny filaminana ao amin'ny Vondron Eropeana."
BORDERXPRESS dia mampiasa kioska avelan'ny biometrika ho an'ny tena manokana hanafainganana ny fizotran'ny fahazoan-dàlana fa tsy hanimba ny filaminana. Ny fizotry ny fidirana sy ny fivoahana dia mitovy, amin'izany, eo amin'ny kiosko, ny mpandeha dia mifidy ny fiteniny, manadihady ny antontan-taratasiny ary mamaly fanontaniana vitsivitsy vitsivitsy. Ny kioska koa dia maka sary ny endrik'ireo mpandeha tsirairay izay azo oharina ary voamarina manohitra ny sary ao amin'ny pasipaorony elektronika, na dia eken'ireo kioska ihany koa ireo antontan-taratasy tsy ePassports sy EU Identity. Avy eo ny mpitsangatsangana dia mitondra ny taratasim-panafarany kioska any amin'ny manampahefana misahana ny sisintany. Ny kiosit Exit dia azo ampiasain'ny mpandeha rehetra raha ny kioska Entry kosa dia tsy azon'ny olom-pirenena eropeana afa-tsy ny famaritan'ny governemanta.
"Izahay dia manolo-tena amin'ny fametrahana Pafos sy Larnaka ho seranam-piaramanidina mitarika indostrialy, ary ny fanoloran-tenanay ho laharam-pahamehana ny fiarovana sy ny traikefan'ny mpandeha no zava-dehibe indrindra amin'izany, indrindra satria mitady hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny mpandeha izahay," hoy i Eleni Kaloyirou, Chief Executive Officer ao amin'ny Hermes Airport. "Taorian'ny fahombiazan'ny tetik'asa fanandramana hizaha toetra ny fahombiazan'ny BORDERXPRESS ho an'ny fifehezana Exit ao amin'ny seranam-piaramanidina Pafos, dia faly izahay miorina amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny Vahaolana momba ny fitsangatsanganana Innovative YVR miaraka amin'ny fampiharana kioska efatra amby fitopolo ao amin'ny seranam-piaramanidina Larnaka sy Pafos".
Ny kiosko BORDERXPRESS dia manome traikefa maoderina sy mahomby, ary safidy tsara ho an'ny seranam-piaramanidina sy ny governemanta satria manampy amin'ny fampihenana ny vidin'ny asa amin'ny ankapobeny izy ireo ary mamela ny seranam-piaramanidina hanitatra ny fivezivezena amin'ny mpandeha nefa tsy mila manampy toerana fanampiny na loharanom-pahalalana ho an'ny mpiasa. Ny kioska dia manafaka ireo mpiambina ny sisintany mba hifantoka bebe kokoa amin'ny ezaka fampiharana sy ny faharanitan-tsaina.
Ity haitao ity dia novolavolain'ny Innovative Travel Solutions, orinasam-pandraharahana tsy miankina ao amin'ny Vancouver International Airport (YVR), nomena anarana ny seranam-piaramanidina tsara indrindra any Amerika Avaratra tamin'ny taona fahasivy nifanesy. Ireo kioska dia azo alamina mora foana mba hahafeno ny filan'ny governemanta manerantany mitady hampihena ny filaharana sisin-tany amin'ny fidirana sy ny fivoahana ary hanatsara ny fiarovana sy fiarovana ny sisin-tany.
"Amin'ity fanambarana androany ity, ny seranam-piaramanidina Pafos sy Larnaka dia manamora sy manatsara ny fizotran'ny fidirana sy fivoahana ho an'ny mpiasa sy ny mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina," hoy i Chris Gilliland, talen'ny ITS, Vancouver Airport Authority. “BORDERXPRESS dia nanaporofo ny fahombiazany sy ny fahombiazany tamin'ireo seranam-piaramanidina nanerana an'i Canada sy Etazonia. Androany, mirehareha izahay mampiditra ny vahaolana amin'ny tsena eropeana. Zava-bita manan-danja io ho an'ny Solofoam-pitsangatsanganana an-tany vaovao, Hermes Airport, ny governemanta Sipra ary ny indostria, amin'ny ankapobeny.
Miaraka amin'ny kioska maherin'ny 1,500 ao amin'ny seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo 41, BORDERXPRESS dia nanodinana mpandeha 181 tapitrisa mahery amin'ny fiteny 35 manerantany, ary nampihena ny 50 isan-jato ny fotoana fiandrasan'ny mpandeha.
Taste of Belize 2018 hanasongadinana ny tsara indrindra amin'ny sakafo Belizean
Anisan'ny tanàn-dehibe 10 any Etazonia i Honolulu